जुवाडेहरूको राजनितीक दाऊ ।।। – सुचना न्यूज
बैशाख २३, काठमाडौं
उत्तमे तु क्षणं कोपो मध्यमे घटिका द्वयम् ।
अधमे स्यादहोरात्रं नीचेषु मरणान्तक: ।।’
चाणक्य नितीले भन्छ । उत्तम खालका वा असलमान्छेहरू केही क्षण मात्र रिसाउँछन् । मध्यम खालका मान्छेहरू केही बेर अथवा १०/१५ मीनेट सम्म मात्र रिसाउँने गर्दछन् । अधमे स्यादहोरात्रं, अथवा अधम खालका मान्छेहरू घण्टौ घण्टा अर्थात २४ घण्टा सम्म रिसाई रहन्छन । निचेषु मरणान्तक: अर्थात नीच खालका अथवा तल्लो दर्जाका मान्छे हरू आफु बाचुञ्जेल सम्म रिसाई रहन्छन् । रिसईवी राखी रहने मात्र होईन रिसईवी साध्नको लागी गौडा कुरेर वसी रहन्छन । तसर्थ होसियार व्यक्तीहरू उत्तम र मध्यम खालका मानिसहरू सँग मात्र सङ्गत गर्ने गर्दछन । संगत गर्दा ख्याल गर्नै पर्दछ की आफुले संगत गरेको व्यक्ती कुन खालको छ ? कस्तो संस्कार र संस्कृतीवाट हुर्केर आएको छ ? अनी उसको चरित्र कस्तो छ ? अध्ययन गरेर मात्र संगत गर्नु पर्दछ ।
उहिले उहिलेका वुढापाकाहरू ” संगत गुनाको फल पाईन्छ ” भन्थे । अर्थात जस्तो व्यक्तीको संगत गर्यो त्यस्तै खालको फल पाईन्छ भन्थे । साच्चै हो रहेछ । अशल विचार र चरित्रको सङ्गत गर्ने व्यक्ति ले परिणाम पनि अशल र सकारात्मक पाएको देखिन्छ । खराव व्यक्ती र चरित्रको सङ्गतमा परेका हरूको स्वभाव र चरित्र सवै कुरा खराव हुदै गएको पाईन्छ । आजको देशको परिस्थितिले पनि त्यही वताई रहेको छ । राजनितीमा देखीएको गन्तव्य हिनता र चरित्र हिनताले पनि त्यही वताई रहेको छ । कतीपय देश र जनताले आशा गरेका र भविष्य वोकेका भनिएका व्यक्तिहरूको व्यक्तित्व समेत खराव संगतको कारणले धमाधम ढली रहेको पाईन्छ ।
देशको राजनितीको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमाले जस्तो राजनीतिक पार्टी आज नितीहिन र अन्योल ग्रस्त देखीन्छ । सवैलाई समेटेर अघि वढ्नु पर्ने नेतृत्व एक्लै छटपटीदै रूमलीई रहेको देखीन्छ । विचार र विधीका आधारमा चलेको लोकतान्त्रिक पार्टी एक जनाको निजी आग्रह पुरा गर्न उफ्रिरहेको देखीन्छ । जनतावाट अनुमोदन भएको र जनतामा आधारित कार्यकर्ताहरूको कृयाशिल पार्टी आज सिमीत नेताहरूको प्रणालीमा सिमित भएको छ । शान्तीपूर्ण र स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गरेर अगाडी वढिरहेको कम्युनिष्ट पार्टी अहिले अनेक जालझेल र तिकडम हुदै राजनितिलाई जुवाडे हरूको दाऊमा परिणत गर्न खोजीरहेको देखीन्छ । सिध्दान्त र विचारको पर्याय वनेर जनता विच लोकप्रीय वनेको हाम्रो प्रीय पार्टी आज गुण्डा र झल्लाहरूको हालीमुहाली देखेर छक्क परिरहेको अवस्था छ । यो सवै पार्टीमा विस्तारै अधम खालका तत्वहरूको पकड र नेतृत्वमा रहेको त्यस्तै खालको चाह र चरित्रको परिणाम होला ।
आफ्नो कुर्सी सुरक्षित राख्नको लागी लुकाई लुकाई पार्टी एकताको नाटक गरेको पनि देखियो । कुर्सी जोगाउनकै लागी संसद विघटन गरेको पनि देखीयो । कुर्सीको वचाऊ गर्नकै लागी पार्टी एकता भाडेर छुट्टी-भिन्ना भएको पनि हेरियो । लकडाऊनको वेलामा अर्काको पार्टी फुटाएर आफ्नो सरकार वलीयो वनाऊने भन्दै महोत्तरी देखी सासदहरू पोको पारेर ल्याएको पनि देखीयो । कहिले पार्टी फुटाऊने अध्यादेश ल्याएर वितण्डा मच्चाएको पनि हेरियो । कहिले संवैधानिक परिषद सम्वन्धी अध्यादेशको भाडभैलो देखीयो । हुदा खॅादाको दुई तिहाइको प्रतिनिधी सभा विघटन गरेर, आफ्नै पार्टी फुटाएर वालुटारमा रमाइलो नाचगान गरेको पनि हेरियो । दुई तिहाइको दम्भ वाट झारेर अहिले आफै केवल वहुमत पुर्याउन रोई कराई गर्दै महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको पछि लागेर हिडेको पनि देखीदैछ । कोरोनाको दोश्रो भेरियण्टले मुलुक र आम जनतालाई आतंकित गरि रहेको वेलामा विश्वासको मत लीने भन्दै संसदको आह्वान गरेको पनि सुनिदैछ ।
गज्जवको कुरा छ । नियमित अधिवेशनको समय भैसकेको छ । वजेट अधिवेशनको समय आई सकेको छ । नियमित अधिवेशन वोलाएर समस्यालाई सकारात्मक ढंगले हल गर्न साझा प्रयास गर्नु पर्ने वेलामा फेरी चुनावमा जानको लागी वातावरण वनाऊने तिकडम सुरू भएको छ । ” भालुको मन खन्यु माथि ” भने जस्तो राम्रो काम गरेर आम जनताको मन जीत्नु पर्ने समयलाई खुराफाती र जालझेलमा विताऊने काम भैरहेको छ । केवल संसद विघटनको औचित्य पुष्टि गर्नको लागी मुलुक लाई बेमौसमी चुनाव तिर धकेल्ने छलकपट पूर्ण प्रयास गरिदैछ । यो सवै खराव संगतको परिणाम त हुदै हो । त्यो भन्दा पनि कसैमाथीको रिसईवी साध्ने सोच र चिन्तनको परिणाम हो । सधै आग्रह र रिसईवी वोकेर हिड्ने शासकहरू संग दक्षिणको संगत वढे देखीनै गडबडी र वरवादी हुदै आईरहेको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा एउटा अविश्वासको नाटक मञ्चन भयो । त्यो नाटक आफैमा असफल भयो । फेरी अर्को समर्थन फिर्ता लीने नाटक भयो । विश्वासको मतमा फ्लोर क्रस गर्ने चटक भयो । सवै अस्थीरता र अराजनितीका खुराफाती खेल हुन । वहुदलीय प्रणालीमा सरकार आऊछन, सरकार जान्छन । कहिले वहुमतको सरकार बन्छ, कहिले अल्पमत को वन्ला । कहिले मिलीजुली सरकार बन्छ, कहिले आलोपालो सरकार बन्ला । प्रमुख कुरा देश र जनताको सेवाको काम हो । जनताको विश्वास र दलको जनमुखी भुमिका प्रमुख हो । देश र जनता प्रतीको कर्तव्य वोध र जीम्वेवारीताको कुरा प्रमुख हो । जनताको आशा र विश्वासलाई कायम राख्ने र समाजलाई अघि वढाऊने कुरा प्रधान हो । केवल आफु र आफ्नो दलीय स्वार्थ केन्द्रित भएर मात्र पनि हुदैन । हामी त आफ्नो स्वार्थ भन्दा अलीकती पनि माथि उठ्न सकेका देखिएनौ । यो पनि मनभित्र गढेको सत्ता स्वार्थ र परपीडक सोचकै परिणाम त होला ।
गण्डकी प्रदेशमा सरकार विरूध्द अविश्वासको प्रस्ताव आयो । त्यसलाई राजनैतिक रूपले प्रदेश सभामा फेस गर्न नसकिने कुरा थिएन । हामी त ” वनको वाघले खाओस नखाओस मनको बाघले खाने ” ठाऊमा पुग्यौ । आफ्नो सफल सरकारले ३ /३ वर्ष गरेको काम र विधीको आधारमा सरकारको वचाऊ गर्न छोडेर अरू पार्टीको सभासद अपहरण गर्ने ठाऊमा पुग्यौ । सत्ता र शक्तीको दुरूप्रयोग गर्दै कोरोना भएको रसिद वनाएर प्रदेश सभामा मतदानकै वेला जबर्जस्ती जनमोर्चाका सभासदलाई अस्पताल भर्ना गराएर सरकार जोगाऊनु पर्ने ठाऊमा पुग्यौ । यस्तो खाले ‘कुकर्म’ कुनै अशल शासनमा हुने कुरा निस्चय पनि होईन । हामी विस्तारै खराव सङ्गतमा पुगेकाले सत्कर्मवाट श्रेष्ठता हासिल गर्ने कुरा विर्सेर गन्दगी जम्मा गर्ने ठाऊमा पुगि सकेका छौ । अधम र अली निच खालका व्यक्तीहरूको जमावडा पार्टीमा थुप्रीदै गएकोले अशल शासनका गुणवत्ताहरू भुल्दै गैरहेका छौ । वढिसे वढि हामी प्रतीशोधी भैरहेका छौ ।
हाल साल मात्र लुम्वीनी प्रदेशमा भएको नाटक अर्को विडम्बना हो । आफैले प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन वोलाएर वैठक नगरीकन अन्त गर्नु आफैमा नाजायज होइन र । अझ राजीनामा गर्नु थियो त प्रदेश सभामा गर्दा झन राम्रो हुन्थ्यो होला । कती गज्जवको कुरा छ । सरकार अल्पमतमा परेको भन्दै नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने काम भयो । त्यसको एक घण्टा वित्न पाएन । फेरी एकल वहुमतको सरकार भन्दै मुख्यमन्त्रीको नियुक्ती लीने काम भयो । भनिदैछ प्रदेश सभामा विपक्षी हरूको वहुमत छ । मुख्यमन्त्री अझै अल्पमतमा छन अरे । अल्पमतमा रहेको सरकारले पुन शपथ खाने काम समेत गर्यो । यो सव कतावाट र के को छटपटीमा भैरहेको छ । वुझि साध्य भएन । वेला न कुवेला प्रदेश प्रमुखहरूको वर्खास्दी भयो अनी साटाक सुटुक्क हुने आफन्तहरूको नियुक्ती पनि उस्तै छ ।
यहि हो सत्ता मोहको चरम नमुना । अनी संगत गुनाको फल पनि । सत्ताको चास्नीको मज्जा अनी खराव संगतको परिणाम । जव देखी नेतृत्वको ओरीपरी गोयलहरूले गोलचक्कर लगाऊन थाले यस्ता घटनाहरू भैरहेका छन । जव देखी जय शंकर हरू वालुवाटार वरीपरी रम्न थाले त्यहीवाट समस्याहरू सुरू हुन थालेका छन । पुर्खाको पाला देखी सत्य साबित भएको उखान फेरी ताजा भयो । ” संगत गुनाको फल “। लहै साथी हो । मौकामै सोचौ । आफु र आफ्ना हरूलाई सच्याउने काम गरौ । अधम र निच व्यक्तिहरूवाट वचौ र वचाऔ । उत्तम र मध्यम खालका अशल मानिसहरू संग संगत गरौ । व्यक्ति, समाज र देशको राजनितीलाई सत्-मार्गमा लिएर जाऊ । जय जय होस ।।।
पुरूषोत्तम पौडेल ।
नेपाल खेलकुद महासंघ - जिन्दावाद ।।